Toy ny tany amin’ireo Faritany efa nanatanterahana azy dia fampirantiana sary, mirakitra ny tantaram-piainan’ny Amiraly Didier Ratsiraka, filoha mpanorina ny antoko hatramin’ny fahazazany ka hatramin’izy teo amin’ny fitondrana ary ireo zava-bitany ao Toliara no hisantarana izany, ny fiandohan’ny volana desambra. Ny 9 sy 10 desambra kosa no tena votoatin’ny fankalazana. Ho avy any Toliara ny amiraly Didier Ratsiraka filoha mpanorina ny antoko amin’io. Io ihany koa no fotoana voalohany hihaonany sy hifampikasohany amin’ny vahoakan’i Toliara, taorian’ny niverenany an-tanindrazana tamin’ny 24 novambra 2011. Nanao fanambarana miendrika ampamoaka hatrany ny Amiraly Didier Ratsiraka tamin’ireo toerana rehetra notsidihiny. Inona no hambarany ao Toliara amin'io 9 sy 10 desambra 2016 io ? Hisintaka amin’ny sehatra politika amin’izay ka hampita ny fanilo amin’ny tanora Arema ?